ton December 12, 2012 - 9:49 pmalot of the myanmar from phuket,they don’t know about the december 14 case.so ,please help from phuket workers. sorry for the poor english and please understand what i mean ton
Reply yangonthar December 13, 2012 - 2:11 pm ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ ဘာတွေပြောပြော ဘယ်လိုဆွေးနွှေးဆွေးနွှေး ၊ ပြည်တွင်း က ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီတွေကတော. ပွဲစားခစားဖို. အစိုးရကို သိန်းငါးဆယ်တင်ပြီး လက်ခမောင်း ခတ်နေကြပြီ ။ အလုပ် လုပ်မယ်.အလုပ်သမားတော.သေဖို.သာပြင်ထားတော.။ ပွဲစားတွေစု ပြီးလိုင်စင်လျောက်ပြီး ။ သူတို.ကပွဲစားပပျောက်ရေးလို. အရှက်မရှိအသံကောင်ဟစ်နေတာ တော်တော်ရီစရာပါ၊
Reply Aung Khin December 14, 2012 - 5:56 pm မြန်မာတွေလည်း အများအားဖြင့် စဉ်းစားဉာဏ်
Reply လူသား December 19, 2012 - 2:35 pm ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရင် တစ်နေ့ဘတ်နှစ်ရာ အနည်းဆုံးရတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်